Global Voices teny Malagasy » Iran: Feon-kira Maitso hanohanana ny Hetsika Fanoherana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 03 Febroary 2010 20:05 GMT 1	 · Mpanoratra Fred Petrossian Nandika Candy
Sokajy: Iràna, Fanoherana, Fitantanam-pitondrana, Hafanàm-po nomerika, Politika, Zavakanto & Kolontsaina
Mampiasa fomba maro enti-manohitra  ny fanjakàna Iraniana ny Hetsika Maitso (Iraniana mpanohitra). Misy ireo mpitoraka blaogy Iraniana no manolo-kevitra hanovan'ny olona ny feon'ny findainy hanana ny fanenon’ ilay hira ‘Ey Iran’, antemam-bahoaka any Iran, mba hanehoan'izy ireo ny firaisan-kinany amin'ny hetsika fanoherana. Indro misy sombin'izany hira  izany:
Oh Iran, ilay firenem-batosoa
Oh, ny taninao no loharanon-javakanto
Ho lavitry ny fisainan-dratsy anie ianao
Ho ela velona mandrakizay anie ianao
Eh ry fahavalo, raha vato ianao, izaho kosa fonjamby
Aoka ho soron'ny fahadiovan'ny tanindrazako ny aiko
Fa ny fitiavanao no iantsoana ahy
Tsy lavitra anao mihitsy ny eritreritro
Ho anao, oviana no hanan-danja ny ainay?
Rezza view dia manoratra  [fa]:
Firaisan-kina sy fiaretana no lakilen'ny fandresentsika hatramin'izao. Hira mahafinaritra tsaroantsika rehetra ny Ey Iran oh firenem-batosoa. Andao isika hifidy ny feon'io hira io ho fanenon'ny findaintsika. Any ampianarana, birao, làlana sy anjerimanontolo hahenoantsika io hira tsy ankiato mba hamikirantsika bebe kokoa amin'ny fanatratrarana ny tanjontsika: Iran afaka.
Manoratra  i [fa] Fermesk fa ny dingana manaraka ho an'ny Hetsika Maitso dia ny fampirisihana ny olona hanova ny feon'ny findainy ho ilay hira Ey Iran.
Mampatsiahy i Harfehesaby [fa] fa tamin'ny faran'ny ady teo amin'ny Iran sy Iraka dia nanomboka nandefa izany hira izany ny onjam-peo Iraniana, izay nampirisika olona maro handeha am-bava ady ka hiady. Manantena ity mpitoraka blaogy fa ho afaka eo ambany vahohon'ny mpanani-bohitra i Iran amin'ny 22 Bahman (11 Febroary), tsinjerin-taonan'ny Revolisiona Silamo.
Mpitoraka blaogy maro no nametraka ilay hira ho azo henoina ao amin'ny blaogin'izy ireo:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2010/02/03/4910/
 manoratra : http://rezzaview.blogspot.com/2010/01/blog-post_26.html
 Mampatsiahy i : http://harfehesaaby.blogspot.com/2010/01/blog-post_26.html